मुकुन्द घिमिरेले गरे ‘इन्गेजमेन्ट’ , को हुन् युवती ? – Patrika Nepal
मंग्सिर १२, २०७८ आइतबार 59
काठमाडौं- सामाजिक सञ्जालमा चर्चित मुकुन्द घिमिरे अर्थात् मुकुन्देले इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । शनिबार झापाकी इन्दिरा सङ्ग्रौलासँग उनले औँठी र फूलमाला साटासाट गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनी सामाजिक सञ्जालमा सधै चर्चामा रहने व्यक्ति हुन् । २०५८ देखि २०७० सम्म रत्नपार्कमा भाषण गर्दै उनी निकै चर्चामा रहेका थिए । यतिबेला भने सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्चा हुने गरेको छ ।पछील्लो समय ‘मुकुन्दे’ बाट ‘मुकुन्दाई’ बनेका उनी हरेक युट्युबरका लागी ‘मनि’ झा’र्ने माध्यम हुन्।
राजेश हमालको बिहे देखी अमेरिकी सहयोग/लगानी/दान स्पष्ट नखुलेको तर धेरै चर्चा पाएको एमसीसी सम्मका विषयमा उनका धा’राप्रवाह टिप्पणीले धेरै युट्युबरलाई ‘मनि’को वर्ष गरिदिएको छ। त्यसैले उनलाई अतिथी बनाउन चाहनेको संख्या पनि कम छैन।
कुनै बेला रत्नपार्क गतिलो ‘पब्लिक स्पेयर’ थियो, मुकुन्दे त्यहीँ ‘मुकुन्दायण’ भन्दै रूख चढेर चि’च्याउँथे। पछी फेसबुक र युट्युबमा आउन थाले। अहिले लकडाउनको समय लोकप्रियताको शिखरमा पुगेको ‘क्लबहाउस’मा उनको ‘ईन्ट्रि’ भएको छ।क्लब हाउसमा लकडाउनमा फु’र्सतिला बनेका विश्वभर छ’रिएका नेपालीहरूले उनलाई धमाकेदार स्वागत गरे भन्दा हुन्छ।
मुकुन्द घिमिरेको विषयमा अनेकका अनेक धारणा हुनसक्छन्। मन पराउने पनि र मन नपराउने पनि जता पनि लर्को लामै हुनसक्छ। तर, उनी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन है नेपाली समाजका। उनी जस्तै अरू पनि छन्, उस्तै तरिकाले अमुक राजनीतिक दल वा नेताको पक्षमा उसरी नै कुर्लने।
यो उनीहरूको स्वतन्त्रता हो तर सामाजिक म’र्यादा र कानुनी व्यवस्था भित्रै बसेर उनी जस्तै जसले पनि आफ्नो विचार राख्न चाहिँ पाउनुपर्छ। २०६५ मा मुकुन्द घिमिरे विषयमा ठूलै आलेखमा मैले जे कुरामा पुगेर बिट मारेको थिएँ, रत्नपार्कबाट फेसबुक, युट्युब हुँदै क्लबहाउसमा आईपुग्दा पनि त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै छ।
”प्रजातन्त्रका बा-रेमा कुरा गर्दा खुला बजारसँगै ‘फ्रि मार्केट प्लेस अफ आईडियाज’को पनि कुरा गरिन्छ। ‘मुकुन्दे’का टिप्पणीले ‘फ्रि मार्केट प्लेस’को प्रयोग त गरेको छ। स्व’च्छन्दतातर्फ मोडिने उनका कुरा भि’डतन्त्रतर्फ त लागिरहेको छैन? यसलाई फगत मनोरंजनको रूपमा मात्र लिन सकिएला? के यसलाई ब’रालिएको मान्छेको उट’पटाङका रूपमा मात्र लिन सकिएला?”
यो पनि –फिल्मी दुनियाँमा नायक-नायिकाको अफेयर्स, ब्रेकअप अनि प्याचअपका चर्चाहरू सार्वजनिक हुनु नौलो हैन। नायिका पूजा शर्माको हकमा पनि यस्तै भयो। उनी फिल्मी क्षेत्रमा आएदेखि उनको नाम धेरैसँग जोडियो।
Prevअर्कैसगँ गएकी भनिएकी श्रीमतीलाई छोराछोरी कै मायाले भए पनि स्विकार(भिडियो हेर्नुहोस्)
Nextचितवनमा कसैले शक्ति प्रदर्शन गर्दैमा प्रचण्डलाई फरक पर्दैन : रेनु दाहाल
कञ्चनपुरमा विपन्नको घरमा खर हटाएर टिनको छाना राख्न सुरु